Achọpụtara akwụkwọ maka 2021, nhọrọ kacha mma maka gị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwadoro akwukwo maka 2021
Akwadoro akwukwo maka 2021.
N'etiti ozi ọma dijitalụ nke 2021st narị afọ, otu n'ime ọchụchọ ndị ndị na-agụ akwụkwọ chọrọ bụ "akwụkwọ ọgụgụ akwadoro XNUMX". Maka nke a, edemede a na - ewetara anyị akwụkwọ ndị ama ama nke ewepụtara n'oge puku afọ ọhụrụ, nke dị n'ụdị edemede dị iche iche.
Ndị a bụ ederede na-ekpuchi ụdị edemede dị iche iche. Anyị na-ahụ akụkọ sayensị, ihe omimi, ịhụnanya, ihe nkiri, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụkọ ihe mere eme ... Ha bụ akwụkwọ maka ihe masịrị na agba niile, gwara ha site na echiche dị iche iche. N'ihe banyere akụkọ ndị dabere na ihe ndị mere eme, edepụtara ha nke ọma.
1 Ike nke Nkịta (2005), nke Don Winslow dere
2 Nsogbu nke ahụ atọ (2005), nke Cixin Liu dere
3 Saga nke Detective D. Gurney, nke John Verdon dere
4 Martian (2014), nke Andy Weir
5 Onye nkasi obi (2015), nke Viet Thanh Nguyen
Ike nke nkịta (2005), nke Don Winslow dere
Ike nke nkịta.
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Ike nke nkịta
Ike nke nkịta bụ nke mbụ nkeji nkeji na Don Winslow toro “The Cartel” trilogy. Akụkọ a na àgwà nke thriller ndị uwe ojii na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme bụ otu n'ime ihe ịtụnanya dị ukwuu na akwụkwọ America n'oge afọ 2000. Iji malite, onye na - agụ ya mikpuru n’ime mmegwara ọbara megidere mmadụ - akọwachaghị onye - onye mere ka onye mbu ahụ gafere dịka onye na - enye nkọwa.
Isi nke nkata ahụ bụ ike na-enweghị obi ọjọọ nke a kọwara (ma tacit ma zoro ezo). Nke a mere karịa ihe kpatara ọnyà nke isi agwa ahụ tara. N'aka nke ha, ndozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba n'ụzọ anụ ahụ na omume na-emebi ụdị ụlọ ọrụ na ndị mmadụ niile. Ọ dịghị onye a hapụrụ na-emetụbeghị puku kilomita atọ nke oke oke etiti dị n'etiti Mexico na United States.
Nsogbu ahu ato (2005), nke Cixin Liu dere
Nsogbu ahu ato.
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Nsogbu nke atọ ...Nsogbu ahu ato
A oké ọrụ nke sayensị akụkọ ifo ghọrọ ụwa ama afọ iri mgbe bipụtara na China. Mgbe nọ na Asia ibu Akwụkwọ a meriri 2006 Galaxy Prize, ebe ọ bụ na 2015 na recognitions dị nnọọ ọtụtụ. Otu n'ime onyinye a kacha mara amara bụ Hugo Prize 2015, Ignotus nke 2017 na Kurd Lasswitz na otu afọ ahụ.
Ugbu a, site na ekele nke ndị mmadụ dị ka Mark Zuckerberg ma ọ bụ Barack Obama, akwụkwọ ahụ mechara bụrụ nke a ma ama. N'otu akụkụ, Onye choputara Facebook choputara Nsogbu ahu ato dị ka akwụkwọ mbụ nke ụlọ akwụkwọ gị. Ka ọ dị ugbu a, onye bụbu onye isi ala US họpụtara ya maka ịgụ ya ekeresimesi 2015.
N'ebe ndị na-arụ ọrụ gburugburu, nsogbu ahụ nke atọ bụ nke na-enweghị usoro nkwekọrịta (ọ na-adịkarị chaotic). Ya mere, ndị Liu ji usoro a mee ka Trisolaris, mbara ala nke bụ akụkụ nke usoro mbara igwe nke anyanwụ atọ (Alpha Centauri). Ebe ndị Trisolarian nọgidere na-akpọtụrụ ndị bi n'ụwa site na simulator ọtụtụ egwuregwu a na-akpọ Atọ Ahụ.
Ndi sonyere nke Atọ Ahụ Ha bụ otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị (Frontiers of Science) ndị na-ahụ ọnọdụ nke plawa nke ihu igwe na-enweghị nkọwa. N'oge a, Wang Miao, bụ onye na-akwado ya, batara n'òtù ahụ iji kpokọta ozi gbasara ọtụtụ ebubo ebubo igbu onwe ha nke ọtụtụ ndị otu ya mere.
Na ụwa, afọ nke mgbanwe ọdịnala ndị China (afọ iri asaa) gafere. Ya mere, Ọrụ Wang adịghị mfe n'ihi ọnọdụ nrụgide nke na-adịkarị n'ihi ndị Kọmunist. N'oge dị mkpa nke akụkọ ahụ, otu "mwakpo mbuso agha" nke ndị Trisolarians na-achịkwa olu na-adabaghị adaba. Ya mere, ndị Earthlings ga-akwadebe maka mbuso agha n'ọdịnihu.
Saga nke Detective D. Gurney, nke John Verdon dere
"Verdon bụ ezigbo onye na-edebe Gurney otu ụzọ n'ihu onye na - agụ ya." N'ụzọ nke a ọ kọwara nkatọ nke The New York Times (2014) nye onye kere akwụkwọ nyocha kacha ere ere na narị afọ nke ugbu a. Obi abụọ adịghị ya, ha bụ ederede nwere oke nkọwa zuru oke nke na ọ dị ka ọ bụ ọkachamara omekome ma ọ bụ onye uwe ojii lara ezumike nka dere ya.
M ga-achịkwa nrọ gị.
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: M ga-achịkwa nrọ gị
N'otu aka ahụ, onye edemede New York enweela ike ịmepụta onye nwere ike iwepụta mmetụta ọmịiko na onye na-agụ ya. Na mgbakwunye, esemokwu mmetụta uche na-adịgide adịgide, mbido nke akụkọ ha, ịkọ ọsọ ọsọ ọsọ na ihe ịtụnanya na-aga n'ihu mgbe niile mepụtara "mmanya zuru oke" nke ndị na-ere ahịa kacha mma. Ndị a bụ aha onye na-achọpụta ihe Dave Gurney:
Ama m ihe ị na-eche - Chee maka Nọmba (aha mbụ na Bekee). (2010).
Emeghela anya gi - Mechie Anya gi (2011).
Hapu ekwensu nanya - Ka ekwensu rahụ ụra (2012).
Atụkwasịla Peter Pan - Peter Pan Ga-anwụ (2014).
M ga-achịkwa nrọ gị - Ọdọ Wolf (2015).
Ga-akpọ oké ifufe mmiri - Osimiri ọcha na-ere ọkụ (2018).
Nwa ojii ahụ - N'elu Ugwu Harrow (igba egbe ezubere maka 2021).
Martian (2014), nke Andy Weir dere
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Martian
Ebu ụzọ bipụta ya na 2011 — site na ọtụtụ nkeji nkeji- Martian ewepụtara ya afọ atọ ka nke a gachara n'okpuru akara okpueze. Mgbe e bipụtachara ya “n’usoro iwu,” ọ nwetara ọtụtụ nyocha dị mma. N'ezie, ngbanwe nke aha akụkọ sayensị a na nnukwu ihuenyo dugara n'ọganihu dị ukwuu na aha a na-ewu ewu.
Onye na-eduzi Ridley Scott, Martian bụ Matt Damon na Jessica Chastain, na ọrụ Mark Watney na Commander Lewis. Agbanyeghị - ihe nkiri eserese n'akụkụ- Ọ bụ ezigbo mmiri, ọ dị mfe ọgụgụ, ọchị na akwụkwọ edemede. Nke bu ezi onyinye nyere otutu ihe omuma nke sayensi bufere ya na akwukwo 400.
N'ọdịnihu dị nso, Mark Watney ghọrọ otu n'ime ndị na-aga mbara igwe isii na-aga ije n'elu mbara ala uhie. Otú ọ dị, Na mbido akwụkwọ a, o doro anya na ọ ga-abụ mmadụ mbụ ga-anwụ ebe ahụ. Ihe kpatara ya: ndị ọzọ so na ndị ozi ya hapụrụ ya ka ọ nwụọ mgbe ọ nwesịrị ihe mberede n'oge oke ikuku.
Ma, Watney na-achịkwa ịlanarị ihe karịrị otu afọ (ọkachasị n'ihi mmụta ya banyere botani). Ka ọ dị ugbu a, ndị ibe ya - ndị na-aga n'ụzọ --wa - ga-ekpebi ma ha ga-alaghachi ịchọ ya, nke ga - eme okpukpu abụọ nke oge njem njem.
Onye na-eme ebere (2015), nke Viet Thanh Nguyen
Onye na-eme ebere.
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Onye na-eme ebere
Onye mmeri nke Pulitzer Prize for Fiction (2016). Onye na-eme ebere bu ihe edere n’agha agha Vietnam, nke n’egosiputa ihe di egwu nke akuku abua ahu gunyere. N'ebe ahụ, onye bụ isi nke akụkọ ahụ - nke a maara dị ka "Captain" - kpebiri ịgbaga na California mgbe ọ bụ akụkụ nke ndị agha ndịda.
Mana ọnọdụ onye gbara ọsọ ndụ na mba North America bụ ajụjụ. N'ihi na n'eziokwu onye protagonist abụrụla onye ọrụ abụọ na Vietnam Cong site na mmalite. Maka nke a, ndụ nledo na United States na-eweta ọgbaghara ọdịbendị siri ike na ọchịchọ na-adịgide adịgide ịlaghachi n'ala nna ya. Na njedebe, enweghị ndị mmeri, dịka n'ọgụ agha ọ bụla, ụmụ mmadụ na-efukarị mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Novela » Akwadoro akwukwo maka 2021
Akwụkwọ kacha mma kachasị achọpụta
The Ultimate End of Creation, nke Tim Willocks dere. Nyochaa